Kanaalka Channel Istanbul ee layaabka leh ee Madaxweyne Erdoğan ee dhalashadiisa! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKanaalka Channel Istanbul ee Madaxweyne Erdogan ee dhalashadiisa!
13 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Recep Tayyip Erdogan taariikhda qandaraaska Channel-ka ee Istanbul wuxuu noqon doonaa wax la yaab leh. Horaantii maalinta, maalinta koowaad ee taariikhda qandaraaska Istanbul Channel Erdogan wuxuu ku dhawaaqay taariikhda xaraashka. Majaladda Boxer Magazine Taariikhda qandaraaska Channel Istanbul waxaa soo gaadhay kanaalada ku dhow.
Channel Istanbul taariikhda dhalashada Erdogan dhalashadiisa!
Madaxweyne Erdoğan wuxuu go’aansaday inuu furo hindisada maalinta dhalashada Erdoğan oo ah maalintii ay mas'uuliyiintu si weyn muhiimad weyn ugu lahaayeen Kanal İstanbul, kaasoo uu ugu yeeray mashruuca qarnigii. Taariikhda loo maleynayo inay tahay hadiyadda dhalashada ee loo sameeyay Madaxweyne Erdogan 26-ka Febraayo 2020!
Erdogan dhalasho yaab!
Madaxweyne Erdogan ayaa lagu dhawaaqay inay doonayaan inay qabtaan Kanal Istanbul qandaraaska dhalashadiisa. Erdogan, wareysi uu siiyay telefishan TV;
Erdoğan wuxuu caddeeyey inay ka saareen buuraha qashinka, in ay ahayd bakhaar duurjoog ah waqtigaas, in ay dhaafeen kaydinta casriga ah ee kaydinta duurjoogta ah, wuxuuna xasuusiyay in wargeysyadu u qaybiyeen maaskaro hawadda awgeed.
Madaxweyne Erdoğan wuxuu caddeeyey in markii uu xabsiga galay ay gaaska dabiiciga ah ku wareejiyeen 1 milyan 250 kun oo qoys, laakiin tiradaasi ay ahayd 50 kun oo qoys intii uu la wareegay waajibaadka.
Buurta qashinka ah waxay ku qarxday Ümraniye, halkaas oo 39 ka mid ah shacabkeenu ku dhinteen. Waxaan ugu yeernaa qashin, ceel, dhoobo. Tan kaliya maahan, maamulka CHP ee deegaanka maxalliga ah, musuq maasuq baa jira, waxaa jira maqnaansho, ganaaxyo ayaa jira Tani waa qeexida maskaxda CHP. Isku soo wada duuboo, kani waa ruuxayaga dawlada hoose. Tani waa waxa aan qabanno. Tallaabooyinka aan qaadnay tan iyo maalintaas waa cad yihiin. Qaabka ugu fudud, Eebbe ha u naxariisto, buundadii ugu horreysay ee uu la yeesho marxuum Demirel, buundadii labaad oo la raacday tii Ozal, waxaan samaynay buundadii saddexaad. Laakiin sidoo kale 'Ma galno badda mar labaad' ayaan nidhi. Waxaan ka samaynay Marmaray badda dhexdeeda. Maaha oo kaliya nidaamka tareenka, tunka Eurasia ee nidaamka caagagga. Waxaan ku nidhi. Waxaan sidoo kale sameynay tunta Eurasia tunnel. Badda hoosteeda, waxaan ku xiriirinay Yurub iyo Aasiya laba waddo oo leh marinno tuubbo. Tani waa xisbiga 'AK Party' ee dawladda hoose. Bal ka fikir Bridge Bridge-ka si la mid ah hadda waqtiga u dhexeeya Istanbul iyo Izmir-ka ayaa laga dhigi doonaa 1 saacadood iyo 2 daqiiqo. Buundada Çanakkale ayaa sii socota. Hadda si dhakhso ah ayey u socotaa. Waxaan rajeynayaa inaan sameyn doono hindise sanadkaan la xiriira Channel Istanbul. Mashaariicda iyo wixii la mid ah. Waxay ku dari doontaa hanti ka duwan tan Istanbul. Iyo sadar saddex-sheeko ah. Laba leh caag, hal tareen. Kanal İstanbul waxaa loo diyaariyay sidii mashruuc aad u kala duwan kadib Suaman, Panaman. Mashruucu waa mid cajiib ah. Waxaan rajeyneynaa inay labada dhinacba ku soo kordhin doonto hanti iyo dabcan qaab dhismeedka la qorsheeyay wuxuu noqon doonaa mashruuc qurux qurux badan ugu dari doona Istanbulyaga.
Taariikhda qandaraaska ee Kanal İstanbul ayaa la filayaa in la sameeyo 26 Febraayo 2020. Taariikhda shabakada ayaa kula jiri doonta isla marka la daabaco.
Metrobus oo la yaabay ra'iisal wasaare Erdogan
Isbuuca Wanaagsan ee Waalid iyo Taksim Nostalgia Tram (Sawir Sawir)
Hawl Dhalasho Isbuucle ah oo la socda Tirada Nostalgic ee Beyoglu
Maalinta dhalashada ayaa ka soo kacday tareenka qiiqa
Maalinta Dhalashada Madaxweyne Erdogan
Channelkii ugu dambeeyay ee Istanbul